Soomaaliyaa Ma Muqdisho Keliyaa? – Fariin Ku Socoto Madaxweyne Farmaajo. | SAHAN ONLINE
Soomaaliyaa Ma Muqdisho Keliyaa? – Fariin Ku Socoto Madaxweyne Farmaajo.
Dalka Soomaaliya dowlad si dhamaystiran u maamusha waxaa ugu dambaysay dowladii Maxamed Siyaad Barre madaxdaa ka ahaa oo dhacday 1991, oo ahayd dowlad dhexe oo awoodeedu baahsan tahay (central government), wax walbana ku jirtay gacanta xukunkii ka talinayey muqdisho markii uu dalk qabsaday, gobolada dalka waa koobnaayeen Muqdishana waxay caasimad u ahayd Somaliadii gumaysiga talyaaniga xukumayey?
Sababta jirta oo talyaanigu muqdisho ugu doortay inay noqoto caasimad waxay ahayd:
waxay ahayd meel gumaystaha ahmiyad gaar ah u leh maadaama ay magaaladu ku taal meel xeeb ah.
Talyaanigu wuxuu aad ugu xoogana koofurta Somalia oo uu ku lahaa saldhigyo waa weyn oo beero ah iyo ganacsi.
Goboladda waqooyi bari waxaa ka jiray saldanooyin iyo maamulo soo jireen ah sidaa darteed mrna uma suura gelin in Talyaanigu ku soo dhiirado sida Goboladda Koonfureed oo kale, iyadoo uu talyaanigu heshiis la galay Boqorkii xukumayay gobolladan ee Boqor Cusmaan oo uu u arkayey mid awood leh oo aan xoog lagu qabsan karin.
Goboladda waqooyi Galbeed waxaa gacanta ku hayey dowladii Ingiriiska oo loogu yeeri jiray (British somaliland).
Maamuladdii xukumayey Koofur iyo waqooyi waxaa ka dhexeeyay xurguf iyo loolan fara badan waxay marar badan ku murmi jireen sidii loo kala qaybsan lahaa qaarada afrika.
Sidaa darteed Talyaanigu wuxuu muqdisho ku doortay inay noqoto meel caasimad si dalka intiisa kale uga maamulo.
Dowladii milleteriga ee dalka qabsatay 1969 waxay awoodeedii oo dhan isugu geysay inay muqdisho dhisto gobollada kalena mashaariic kooban ka fuliso taasoo qof kasta khasab ku noqotay inuu Muqdisho u shaqa tago ama waxbarasho u doonto oo ay dhibaatooyin fara badan kala kulmi jireen iyo boqolaal wershadood laga fuliyay oo dadka degaanku bililaqaysteen haddana doonaya in kuwo kale loo dhiso.
Dowladdii kacaanku iyo kuwii ka horreeyeyba midkoodna ma lahayn qorshe lagu horumarinayo wixi ka baxsan Muqdisho marka laga reebo magaaladda Hargeysa oo si xoog leh mashaariic aad u fara badan looga fuliyey oo ay siyaasadi ka dambaysay.
Haddaba su’aasha isweydiinta mudani waxay tahay dalka ma muqdisho keliya baahida, cudurada, shaqo la’aanta ka jirtaa? Caawinaada ma waxaa u baahan carruurta muqdisho keliya mise kuwa Baydhabo, Xudur iyo Cadaado gaajada, baahida iyo cudurka ugu dhamaanayaa?
Dib u dhiska ma waxaa u baahan Muqdisho oo keliya mise shacabka Gobollada dalka oo dhan ku nool oo abaaruhu cayreeyeen oo cudurada, gaajada iyo faqrigii burburiyeen.
Sababaha ay maamul goboleedyadu u samaysmayaan waxaa ugu horreeya Muqdisho oo wax walba laqday.